Dhaqtarkii ku dhayilaa ma dhalan weli, ee dhagaxtuurka sii baro!!!
Waan idin salaamay dhamaan akhristayaasha qiimaha iyo qaayaha lahoow. Sida la wada ogsoon yahay bulshada caalamka oo idil ee maanta nabadda iyo badhaadhaha ku wada nooli waxay soo mareen marxalado kala duwan iyo mawjado mushaakilo ah oo soo taxnaa ilaa Xaawo iyo Aadan, kuwaas oo ahaa qaar dabiici ah iyo qaar dad samee ah labadaba ilaa haddana socda. Mar walbana waa inaan ogaanaa in inta qof bani,aadam ahi nool yahay uu mushaakilkuna jiri doono. Nolol bilaa mushaakil ahi suuragal kama aha dunidan aynu maanta joogno. Ti kastaba ha ahaatee bulshada calamku si wada jir ah ama kala gooni gooni ah ayay ula dagaalamaan dibaatooyinkaas oo dhan intii awoodooda ah, runtiina way dadaaleen oo qaar badan ayay wax ka qabteen ama ka takhaluseen.
Dagaalada ahliga ah ee maanta dhulkeena ka jira way jirtey mar ay haysteen iyagaba, laakiin nasiib wanaag way ka tashadeen, way ka wada hadleen,waxayna garteen dantooda oo ah inaan dagaal horumar lagu gaarin dibu dhac iyo bur bur mooyee. wanaaga ay maanta haystaana waxa hantisiisay xalkii dhibaatooyinkii shalay haystay ee ay ka guureen.
Haddaba akhristoow in kastoo ay fiicnayd inaynu inaga lafteenu taariikhdoodaa madoobeyd ku tusaale qaadano oo wax ka barano si aanu uga badbaadno dhibaatooyinkii dunida soo aafeeyey, ayaa ilaa hadda aynaan isweydiinba intaynu maskax fiyoow ku gorfayno xaajada, meesha salaaddu ka xirmi la,dahay oo weli aan burbur iyo bara kac ku jirnaa,ilmaheeniina cidla aan ciirsi lahayn ku daryeel la, yahay oo uusan haysan cunto,dawo,hooy iyo adeegyadii uu xaqa u lahaa oo idil.
Waxa maanta jooga qofkaan garani beri waxa soo socda ma garto, waxna kama qaban karo. marka miyaaney fiicnayn qofka maanta hal xabbo oo roodhi ah haysta inuu jab berri u dhigto ileen wax dhici doona lama ogee,si aadan berri u gaajoon ood u badbaaddo.
Jiilasheenna dambe inama saamixi doonaan oo aayahoodii iyo mustaqbalkoodii ayaynu mugdi gelinay inteenna maanta nooli, meel kasta oo aynu joogno,xabaashii aayaheena ayaa la qodayaa markaasaynu daawanaynaa.Qofna daah kama saarna waxa dadka iyo dalku ku danbeyn doono Daawanaayoow waa dalkaagii ceelna uma qodna ciidana uma maqna. Dhinac walba ayaa dagaalka iyo dabkaba lagaa geliyey. waxa lagaala dagaalamayaa waxbarashada,afkaaga ,tarankaaga. Mustaqbalkana waxaan noqon doonaa umad la leeyahay oo aan dal,af iyo astaan u gaar ah toona lahayn, xataa taariikhdaadaa la aasayaa (duugayaa). Markaasaad adna reer qurac iyo reer qansax isu sii kala saaraysaa oo naftiina iyo hantidiinaba ku baabi,inaysaan.
Taariikhda adduunka waa la arkay qof xanuunsaday oo is dilay,laakiin lama soo sheegin qof intuu xabbad soo qaaday qof u cadow ah oon u jiir naxayn ku yiri hooyoo igu dhufo aan iska dhintee, waa ta ina haysata maanta. Ninka is leh wadamo nabad ah baan ku noolahay oo dhibku na soo gaari maayoow waad riyoonaysaa ee waxaan ku leeyahay hurdaayoow hadh galay weeyee ka toos. Riyo maalmeedkana waa laga fiican yahay.
Wadamada aynu ku nool nahay maaha waddan aan u dhalanay,xataa ubadkeena ku dhashay weligood kumanaan sano oo dambe oo soo socda ma noqonayaan dad xuquuq buuxda ku leh dhulkaas si kastaba ha ahaatee.
Adigoo dameer ah haddii rinjiga dameer farowga(zebra) dusha lagaa mariyo, dano gaar ah oo lagaa leeyahay dartood, ogoow in rinjigaasi uu maalin maalmaha ka mid ah kaa masaxmi doono oo aad dameerkaagii noqon doonto.
Haddii shalay Mr X uu khaldamay oo walaalkiis oo markaas uu cadow u arkayey gowracay, isagoo u malaynaya inuu wax wanaagsan samaynayo, jaahilnimo haysay darteed uu halyeeyo maanta laga yaabo inay isaga gabood u noqon lahaayeen uu god ku riday, ileen qalad laguma saxo qalade(Two wrongs don't make a right) in Mr Y isna yiraa waa markaygii miyay quman tahay?? Goormaan ogaanaynaa in wiilka ama gabadha Soomaaliyeed meel kasta oo uu ku dhinto ay tahay lug inaga go,day? goormaan ogaanaynaa in ilaahay maalin maalmaha ka mid ah wax inaga weydiin doono ilmaha soomaaliyeed ee dhiban meel kasta ha joogee?? Maxaa keenay in ilmaha soomaaliyeed iyo hooyada soomaaliyeed ee ooyaya maalin iyo habeen ka ayaan darnaadaan dhigooda wadamada kale ee farxadda ku dhasha, ku barbaara kuna gabooba??
Akhristoow waxaynu nahay ummad waalan oo madaxa lagaga jiro ee ma is weydiiseen waxa ina haya?? Anigu markaan shaqsiyan taariikhda dib u raacay waxaan u maleeynayaa berigaan yaryareyn markaan kubadda ciyaareyno waxaan ku ciyaari jirney bilaa kabo, (Raali iga ahoow saaxiibkayga leh anigu kabaan ku ciyaari jiray oo libaax sanka taabtaan ahaa,waxaan ka hadlayaa majooratiga soomaalida). markaa kubadaha markaa waddanka yaalay oo aad u yaryaraa dartood ayaa maalin walba qofbaa dhagax amaba dhulka laada markaasuu dhiig ka yimaadaa. waxaanu isku daweyn jirney budada madoow ee ku jirta baytariyada oo meesha dhaawacu naga gaaray ee dhiigaysa ku shubi jirney,wax yar oo madow oo baytariga ku jirta oo sida xanjada oo kale ahna xanjaan ka dhigan jirney oo waan calashan jirney.95% dadkaan weydiiyey inay baytariga isticmaaleen waxay ii sheegeen inay isticmaaleen. waad ogtihiin oo baytarjga waa sun, dhulkan aynu joogno qashinka kale xataa laguma daro ee gaar ahaan baa loo ururiyaa maalin gaar ahna waa la qaadaa. Waddanka Holland reer kasta waxa la siiyaa biin loogu tala galay baytariyada oo qudha, bishiina 2 jeer baa la qaadaa. hadaba akhristoow 'radio active' dhiiga inoo raacay ayaa maskaxdeena fadhiya ee ilaahay ha inaga daweeyo.
Ugu dambeyntii akhristoow maadaama oo aynaan fayoowbeen, dhaqtarkii ina dhayi lahaana uusan weli dhalan miyaysan habooneyn inaynu Mohamuud Cabaas-Ka Falasiin ka codsano inuu deeq waxbarasho u fidiyo da'yarta soomaaliyeed si ay u soo bartaan dhagaxtuurka ama sida dhagaxa loogula dagaalamo taangiga cadowga, maadaama mustaqbalka dhow dariiq kasta,tuulo kasta, magaalo kasta iyo gobol kasta lagu arki doono taangiyada cadowga oo difaac kaga jira haddaan xaaldda maanta jirta layska wada kaashan oo wax laga qaban.
Ing.Farhan fagah fagah
Faafin: SomaliTalk.com | July 17, 2008